एक VLAN के छ
एक वीपीएन के हो?एक VLAN के छसामाजिक सञ्जाल आक्रमणहरू रोक्न 8 तरिकाएक VPN को उपयोग गर्न को लागि एक एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क को सुरक्षितA Linksys WRT54G Wireless G Broadband Router
एक वीपीएन के हो?
सामाजिक सञ्जाल आक्रमणहरू रोक्न 8 तरिका
एक VPN को उपयोग गर्न को लागि एक एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क को सुरक्षित
A Linksys WRT54G Wireless G Broadband Router
सुरक्षित तरिकाको तरिका (BGP) सीमा गेटवे प्रोटोकल
तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित छ
इन्टरनेट प्रोटोकल सूट
तपाईं सबै 8 सजिलो चरणहरुमा आईपी subnetting को बारे मा जान्न चाहन्छ सबै केहि
ह्याट्स आईपी मेरो आईपी
Windows मा 10 मा मेरो आईपी ठेगाना कसरी पत्ता लगाउँछु
तपाईंको आईपी ठेगाना कसरी पत्ता लगाउन
आईपी ​​ठेगाना के हो?
मेरो आईपी ब्लगमा स्वागत छ
VLAN के हो?
VLAN शब्द को अर्थ हो वर्चुअल स्थानीय एरिया नेटवर्क। "भर्चुअल" द्वारा यसको कुनै भौतिक सञ्जाल खण्ड छैन तर एक तार्किक सञ्जाल खण्ड।
एक भौतिक सञ्जाल सेन्टर दुई इथरनेट स्विच हुन सक्ने प्रत्येक नेटवर्कमार्फत प्रत्येकमा चलिरहेको छ।
एक तार्किक सञ्जाल सेन्टर वा "VLAN" एकाधिक सञ्जालहरूको लागि एक ईथरनेट स्विच कन्फिगर गरिएको हुन सक्छ।
VLAN प्रयोग गर्ने बिन्दु के हो?
आजको नेटवर्किंग वातावरणमा धेरै ल्यानहरू (स्थानीय एरिया नेटवर्कहरू) धेरै ठूलो मात्रामा मापन गरिन्छ। राम्रो सञ्जाल प्रथाहरूमा तपाइँ प्रसारण डोमेनलाई सानो सानो टुक्रा वा बहु ल्यान्समा तोक्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईसँग फरक विभागहरू जस्तै लेखांकन र बिक्रीको लागि उदाहरणका लागि सुरक्षा उद्देश्यका लागि ट्राफिकलाई फिल्टर गर्न पनि तपाइँ सञ्जाल अलग गर्न चाहनुहुन्छ। बिक्रीले केही प्रकारको प्रणालीहरू पहुँच गर्नका लागि लेखा प्रशासनिक सञ्जालहरूमा हुन सक्छ तर यी सबैलाई।
जान्छ कि तपाईंसँग दुई विभागहरू, लेखा र सेल्ससँग ठूलो भवन छ। लेखाकसँग 125 प्रयोगकर्ताहरू छन् र सेल्सले 200 प्रयोगकर्ताहरू छन्। तपाई प्रत्येक विभागले एकल कक्षा सी आईपी सबनेटसँग आपूर्ति गर्न सक्नुहुनेछ जुन प्रत्येक 254 प्रयोग योग्य होस्ट ठेगानाहरूमा अनुमति दिन्छ। यो प्रत्येक समूहमा ग्राहकहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त भन्दा बढी हुनेछ। तपाईसँग सबै 325 प्रयोगकर्ताहरूलाई समर्थन गर्नका लागि पर्याप्त पोर्ट घनत्वसँग एक इथरनेट स्विच छ र त्यसपछि केहि र स्विच VLAN र Inter-Vlan मार्ग सक्षम छ। तपाईले बिक्री र VLAN 1 को लेखांकनको लागी VLAN2सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि केवल बन्दरगाहहरू फेला पार्नुहोस् जो प्रयोगकर्ताहरूसँग जोडिएको छ र पोर्टको VLAN सम्बन्धी विभागमा सेट गर्नुहोस्।
अब तपाईसँग तपाइँको विभागहरू विभाजित भएका छन् तर उनीहरूको लागि हाल कुनै पनि तरिकाको रूपमा कुनै पनि तरिका छैन किनकि तिनीहरू एउटै भौतिक उपकरणसँग जोडिएका भए पनि तिनीहरू विभिन्न तार्किक खण्डहरू वा VLAN द्वारा विभाजित छन्। यो जहाँ अन्तर-VLAN मार्गिङ खेलमा आउँछ। तपाईँले स्विचको आन्तरिक राउटर कन्फिगर गर्न आवश्यक छ जस्तो कि यो दुई तार्किक खण्डहरू वा VLANs बीच डेटा मार्ग गर्न सक्छ। अधिकतर अवस्थाहरूमा आन्तरिक रूटर पनि सिस्कोको ACLs (पहुँच नियंत्रण सूचीहरू) जस्तै केही प्रकारको सुरक्षा कार्यक्षमता हुनेछ। तपाईं सामान्यतया स्रोत र गन्तव्य ठेगानाहरू, सञ्जाल र प्रोटोकल बंदरगाहहरू इनबाउन्ड वा बाहिरबाउन्ड ट्राफिकको लागि निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
कहिलेकाहीँ तपाईं म्यान (महानगरीय एरिया सञ्जाल) अवस्थामा एक मात्र इमारत हुनेछ वा LAN (स्थानीय एरिया सञ्जाल) अवस्थामा केवल धेरै फर्शहरू। यस स्थितिमा तपाईले माथिल्लो ईथरनेट स्विचहरू बीचमा अपलिङ्क अपफेसहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ र "ट्रंक" VLAN मार्फत यी अपलिङ्कहरू मार्फत VTP (वर्चुअल ट्रङ्किङ प्रोटोकल) मार्फत जानकारी प्रदान गर्दछ।
सामान्य रूपमा VTP वातावरणमा तपाइँसँग सर्भर मोडमा एक प्राथमिक स्विच वा रूट स्विच चलिरहेको VTP चलिरहेको छ। (नोट: त्यहाँ VTP को धेरै संस्करणहरू छन्) "रूट" मा जडान गरिएको तपाईंसँग ग्राहक वा पारदर्शी VTP मोडमा चलिरहेको पहुँच स्विच हुनेछ। "रूट" र "क्लाइन्टहरू" बीचको अपलिङ्कहरू VT सूचना र ट्राफिक एकाधिक VLAN को लागि लिनको लागी "ट्रंक" को रूपमा कन्फिगर गरिनेछ। लिङ्क स्थापना भएपछि एकपटक VTP सर्भरले ग्राहकहरूलाई सबै VLAN जानकारीसँग अद्यावधिक गर्नेछ जुन यो थाहा छ। यस बिन्दुमा तपाइँ यी VLANs सँग ग्राहक स्विचहरूमा बंदरगाहहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ र यी VLANs को लागि डेटाले तिनीहरूको सम्बन्धित भर्चुअल ल्यानमा ट्रंकहरू लाई पछ्याउनेछ।
बेशक यो एक धेरै सरल व्याख्या हो, मैले लापरवाही र एसटीपी (स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकॉल) सादगीको लागी यहाँ विचार गरेन।
मेरो आईपी सबै भाषामा उपलब्ध छ! हेर्नुहोस् MyIp होमपेज भाषाहरु